I-Medieval Cozy Getaway (indlu yeebhedi ezi-2, iMountain View)
UJustin unezimvo eziyi-194 zezinye iindawo.
Indlu enamagumbi okulala ama-2 kwindawo yembali yelali yokuphumla nenoxolo yaseGiuliano di Roma. Ikhitshi ihlaziywe ngezixhobo ezitsha kwaye igumbi lokuhlambela lineshawari enkulu yokuhamba. Ibhalkhoni kunye neefestile zijongana nembono entle yentlambo ekufutshane. Indawo yokubhaka yasekhaya kunye neevenkile zikumgama wokuhamba. Imizuzu engama-45 ukuya eRoma okanye kwiilwandle ezikufutshane. Indawo yokupaka yasimahla 200 m. kude. I-WiFi yasimahla. Iitawuli kunye neelinen zinikezelwa.
Le yindlu epholileyo nenempahla entle ekwinqanaba eliphakathi elineseti enye yezinyuko kumbindi wembali yelali yase-Italiya enomtsalane engekude kakhulu neRoma. Kukho amagumbi okulala ama-2, igumbi lokuhlambela eli-1 eligcweleyo, ikhitshi eligcweleyo, igumbi lokuhlala elinendawo yokutyela kunye nebalcony. I-Wi-Fi yasimahla ibandakanyiwe..
Izitalato ezininzi ezinomtsalane zabahambi ngeenyawo ezineevenkile ezintle ezincinci. Indawo yokupaka yasimahla ingaphandle kweendonga zeziko lembali (malunga neemitha ezingama-200 kude.) Kukho iivenkile ezimbini ezincinci zegrosari kumgama wokuhamba ukusuka endlwini. Kukho indawo yokubhaka entle kunye nepizzeria entle kakhulu kumgama wokuhamba. Ngolwazi oluthe vetshe nceda uqhagamshelane nathi, abanini propati.
Sifumaneka ngefowuni, ngesms nangee-mail.
Siamo disponibili ngefowuni, SMS i-imeyile.